Fatịlaịza na ibu regulator "Zircon": ntụziaka maka ojiji - Nri - 2020
Ntuziaka maka iji ọgwụ "Zircon": esi esi nri na ifatilaiza osisi
O siri ike iche n'echiche floriculture taa na ubi ugbo na-enweghị ndị na-enye aka na nzụlite na mmepe zuru oke nke ihe ubi na ihe ubi. Agrochemical ụlọ ọrụ na-amụbawanye ọtụtụ ngwaọrụ kachasị ọhụrụ kwa afọ. Enwere mmasị n'etiti ndị bi n'oge okpomọkụ bụ Zircon, bụ ọgwụ na n'otu oge ahụ ọ bụ ụzụ fatịlaịza ma na-eto eto maka osisi. Ka anyi gbalịa ichoputa uru ya na nsogbu ya.
Ị ma? Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe karịrị mkpụrụ ndụ iri asaa na osisi, ọ bụ naanị 15: C, O, H, N, K, Mg, P, Ca, S, B, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn. .
Kedu ka "Zircon" si dị na osisi, usoro na ihe na-arụsi ọrụ ike
Osisi Zircon Growth Regulator: ntuziaka maka ojiji
Isi uru nke nhazi osisi na-eto eto promoter "Zircon"
Ojiji nke "Zircon" na nchekwa
"Zircon" - fatịlaịza maka osisi
Mgbe a na-emepụta nri sitere na mmiri na chemical sitere na ala, ifuru osisi, mkpụrụ osisi na akwukwo nri ihe ubi na-enwekarị nchekasị, na-akwụsị n'uto. A na-eji "Zircon" eme ihe iji kpuchie osisi na dịka onye na-achịkwa usoro usoro nke ịmalite mgbọrọgwụ, ibu, okooko na ịmị mkpụrụ, yana ịmalite iguzogide nje bacteria na nje virus. A na-ejikarị ọgwụ na-eme ihe na-eme ka ndị mmadụ na-aṅụ ọgwụ. N'ezie, o nweghị ihe ndị dị mkpa dị mkpa maka ibu. Uru ya bụ ịmepụta ihe nchedo nke ihe ọkụkụ na ime ka ihe ndị na-edozi ahụ banye na mgbọrọgwụ. Ya mere, a gaghị atụ aro ngwá ọrụ ahụ iji mee ihe dịka fatịlaịza.
A kwadoro ụdị ọrụ dị iche iche nke "Zircon" na ntụziaka maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ebe, karịsịa, a na-atụ aro ya na nrịbama mbụ nke pathogenic flora. A na-emeso okooko osisi na ihe oriri seedlings na prophylactic ngwọta iji guzogide powdery mildew, blight, bacteriosis, ire ere, fusarium, scab, moniliose, perenosprosis na ndị ọzọ pathogens.
Dị ka fatịlaịza, "Zircon" dị irè tupu ị kụọ mkpụrụ n'ala, n'ihi na na-akpali mmepe ma na-agbapụta ome na otu izu karịa karịa ma mee ka amiability nke Ome dị mma. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ na-enyere aka osisi iji megharia n'enweghị ihe mberede iji gbanwee n'oge okpomọkụ, gbanwee ihe ndị mejupụtara ala nke ala n'oge a na-atụgharị ya, na-ewepụ ihe ndị dị na ya. Ịkwadebe ihe ngwọta "Zircon" dị ka fatịlaịza ga-adịgide dịka ntụziaka ahụ si dị. Dịka ọmụmaatụ:
eyịm, n'agbanyeghị ụdị dị iche iche na agba nke anụ ahụ, na-enye ihe ngwọta nke 1 ampoule nke biostimulant na 1 l nke mmiri, nke ha na-enye ruo awa 18 tupu atọ;
a na-agbanwe ngwọta dị otú ahụ maka fatịlaịza nke mkpụrụ osisi nile nke mkpụrụ a kụrụ. Tupu ịgbara ọ na-esi ọnwụ awa 12;
osisi ubi ndị ọzọ niile na-akwa nri na ngwọta nke ụwa nke 20 tụlee ọgwụ na 1 liter mmiri, nke a dọtara maka ihe dị ka otu ụbọchị;
"Zircon" dị ka fatịlaịza a na-eji eme ihe n'ime ime ụlọ n'ime ọnụego 8 nke ego kwa 1 liter mmiri, na usoro nke budding ọnụ ọgwụ ahụ belatara ọkara.
Ị ma? Ndị biostimulants belata ibu nke pesticides, meziwanye ọnọdụ nke ala, gbochie ọnwụ nke micronutrients ma gbochie ịbanye n'ime ihe ndị na-emerụ ahụ n'ime mpaghara ahụ.
Ihe mejupụtara "Zircon" bụ ihe wepụtara nke Echinacea purpurea na esters, dabere na etisasịwo hydroxycinnamic asịd. N'ihi ya, ihe niile dị n'ime ọgwụ ahụ dị na mgbagwoju anya n'obere cellular nwere antiviral, antimicrobial, antioxidant na antitoxic utịp na horticultural kụrụ. Ngwaọrụ enweghị ike imerụ onye ọ bụla, osisi ma ọ bụ gburugburu ebe obibi. N'otu oge ahụ, ọ na-emegharị osisi ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gbakwunye otu di na nwunye na mmiri maka ụtụtụ, okooko osisi ahụ ga-ala ma guzoro ogologo oge.
A na-ejikọta akụrụngwa ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụmụ ahụhụ na ọgwụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ma e wezụga nke nri na-emepụta ihe ndị dị na alkaline. N'ọnọdụ ọbụla, ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ iji chọpụta na ọgwụ dị. Maka nke a, jikọta obere mkpụrụ nke ma ihe ma hụ. Ọdịdị nke sedimenti na-egosi njedebe na-adịghị mma.
A na-eji ọgwụ "Zircon", dịka e kwuru na ntuziaka maka ojiji, dị ka velcro mgbe ị na-emeso osisi na ndị ọzọ nchebe megide ọrịa na pests. N'ihi mmeghachi omume nke mmiri, a ga-emezi ihe ha mere.
Ọtụtụ mgbe, ọgwụ ahụ na-abịa n'enyemaka nke ite na ihe ọkụkụ, na-emetụta ọganihu ha. Dị ka onye na-akwado nkwalite, Zircon dị irè, n'ihi na ọ na-ewusi usoro mgbọrọgwụ ike ma na-enye aka na mmepe ya, na-eme ka ọganihu nke Ome, okooko osisi, gbochie ịwụfu nke ovary ahụ, na-eme ka ntinye nri dị na ya. Usoro ndị a enwere ike ikwu n'ihi mmetụta nke ọgwụ ọgwụ ndị dị na phytohormones bụ ndị na-ahụ maka uto, okooko na ịmị mkpụrụ nke ihe ọkụkụ ahụ.
"Zircon" dị oké mkpa maka osisi ime ụlọ, mgbe ọnọdụ nke ụlọ na-eto n'elu ikuku ma ọ bụ n'elu ikuku dị elu adịghị ekwe ka ịmepụta microclimate dị mkpa maka okooko osisi, si otú a mee ka ọ bụrụ onye na-adịghị ike maka ọrịa na ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ. Ọgwụ ahụ na-edozi nsogbu ha, na-enyere aka ime mgbanwe n'ọnọdụ ọnọdụ nrụrụ nke ọkụ ọkụ, ikpo ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ na-ezighi ezi, na ikpe na-emepụta omenala - ọbụna site na-agbanwe agbanwe. Otu esi eji "Zircon" mee ka ifuru mmiri n'ime ụlọ, anyị kwuru n'elu, na iji kpalite uto nke flowerpots tupu akuku, akpochapu osisi ha ruo awa iri na isii n'ime ihe ngwọta nke 1 tinye ọgwụ na 300 ml mmiri. A na-atụle otu ngwakọta ka mmiri mee ka ndị na-amịnye mmiri na-etolite mgbe transplanting mma ifuru kụrụ.
Ọ dị mkpa! Mmiri maka ịgha mkpụrụ ga-adị n'ime ụlọ okpomọkụ.
Tinye nhazi osisi n'ubi "Zircon" nwere ike ịbụ na nhazi mbụ nke omenala ugbo, dịka e kwuru na ntụziaka ahụ. Dị ka atụmatụ oge ochie si dị, 1 ampoule nke ihe a na-atụgharị n'ime mmiri 1 liter. Dabere n'ụdị nhazi na àgwà nke osisi, a na-achịkwa ọnụego ya. Dịka ọmụmaatụ:
a na-etinye mkpụrụ osisi fatịlaịza ruo awa asatọ na ngwọta nke 40 tụlee nke biostimulant na 1 l mmiri;
otu ngwakọta a kwadebere maka mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na-arị elu, ma ọ bụrụ na a na-edebe rhizomes na mmiri mmiri ruo awa 12;
maka akuku umu-eto eto ndi ozo, o bu iji jughari ala 20;
mgbe ị na-eri nri mkpụrụ osisi na Zircon, a na-edebe pasent 10 nke ọ bụla lita 1 mmiri ma na-edebe ọka ruo ihe dị ka awa asatọ;
20 na-agbaze na mgbọrọgwụ nke mkpụrụ osisi na 1 l nke mmiri, na iri nke liter nke ngwọta maka akpa 2 nke ihe akụrụngwa;
ma gladiolus bulbs na ngwọta yiri nke ahụ ga-agwụ ike ụbọchị dum;
ọzọ bulbous ifuru ubi na-diluted na 40 tụlee na 1 liter mmiri ma tinye maka ụbọchị abụọ;
iji kpalite uto nke cucumbers, ọ ga-adị mkpa iji kpoo ọka ruo awa asatọ na ngwọta nke 5 tụlee "Zircon" na 1 l nke mmiri.
A na-eji ọgwụ eme ihe ọ bụghị nanị n'oge ọdịda, ma n'oge oge na-eto eto. Ka ndị seedlings wee na-eto nke ọma, ka oge na-aga, a na-atụgharị ha na ngwọta nke 4 tụlee ọgwụ na 1 liter mmiri:
a na-atụgharị cucumbers na ọdịdị nke mbụ epupụta na mmalite nke budding;
a na-edozi tomato mgbe ọ kụrụ na ugboro atọ n'oge okooko;
eggplants na ose na-atụgharị mgbe akuku na n'oge e guzobere buds;
a na-emeso omenala ndị na-edozi anya na "Zircon" ruo n'ókè dị mkpa;
zucchini, melons, watermelons - na ọdịdị nke atọ epupụta n'oge budding;
eto eto nke osisi apụl, pears - na mmalite nke ịdekọta buds na ụbọchị 14 mgbe okooko.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọdịnaya nke ampoule na-agbaghasị, ọ ga-ama jijiji.
Ojiji nke "Zircon" maka seedlings tụrụ aro 1 oge kwa izu enwe ọnụ ọgụgụ dị njọ na okpomọkụ, enweghị mmiri ala, nakwa maka pests ndị na-emebi emebi, ihe atụ ndị a gbanwere.
Maka nri beri, otu mkpụrụ nke biostimulant na-abawanye ruo 15 tụlee; Maka cherị na cherị, ọnụego ahụ dị 10 tụlee, a na-eme ọgwụgwọ n'oge oge budding na izu 2 mgbe okooko. A na-emeso poteto na "Zircon" dị ka ihe na-akpali akpali ozugbo ọ pụtachara Ome na ná mmalite nke nhazi nke inflorescences dị ka nha nke e gosipụtara na ntụziaka: 13 tụlee kwa lita 10. Site n'omume, a na-edozi ụdị kabeeji niile.
Akụkụ bụ isi nke ọgwụ ahụ na àgwà na-abụghị toxicity. O nwere uru ndị ọzọ:
n'ime ihe ubi a kụrụ n'ubi, usoro mmezu malitere izu ole na ole gara aga karịa mgbe ọ bụla;
mgbe ịghacha mkpụrụ osisi, ike ndị dị ike na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ usoro ngwa ngwa;
mkpụrụ na-abawanye site na pasent 50;
usoro nke na-agbanye na ngbanwe maka ọnọdụ ọhụrụ na-ebelata;
mmepụta ihe na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke pesticides, ọla arọ dị arọ, radionuclides;
"Zircon" na-enyere osisi ahụ aka ịlanahụ ụkọ mmiri ozuzo, oyi na-adịru nwa oge, enweghị ìhè, oke mmiri;
fatịlaịza "Zircon" mgbe ngwa malitere itinye na ọkwa cellular, na-enweghị nsogbu nke osisi;
na-enye aka na normalization nke homeostasis, ya bụ, usoro mmezi nke ọdịbendị;
dị irè ọbụna n'ọnọdụ dị ala.
Ọgwụ ọjọọ dị obere, E kenyere ya klas nke anọ maka ụmụ mmadụ, anụ mammals, aṅụ, na ihe ndị dị ndụ na mmiri. Ngwá ọrụ ahụ enweghị ihe ọ bụla ịchọta na ala, iji merie ala mmiri, na-egbu osisi.
Ma, n'agbanyeghị nke a, tupu i dozie ihe ngwọta nke "Zircon", jiri nlezianya gụọ ntụziaka na nchebe nchekwa. Cheta: a ga-arụ ọrụ ịkwadebe ọ bụla na n'okporo ámá, na-echebe onwe gị na akwa ákwà, globa globe, respirator na anya. Ọzọkwa dị mkpa uwe na akwa mmiri, mma rubba, akpụkpọ ụkwụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ihe ngwọta nke "Citron" wụsara akpụkpọ ahụ, gbanye ya ozugbo na mmiri na-agba agba. Ọ bụrụ na ọgwụ ahụ abanye n'anya, kpochapu ha na ngwọta nke ½ teaspoon nke soda na 200 ml mmiri, wee meegharị usoro ahụ na mmiri na-agba agba n'ọtụtụ buru ibu. Ọ bụrụ na emetụ ihe ngwọta, ṅụọ iko mmiri 2 ruo 3 ma gbalịa ịme agbọ agbọ. Mgbe ahụ, wepụtụ ihe dịka 3 - 5 tablespoons of crushed carbon activated and 1 cup of water.
A na-atụ aro ịkụ osisi dị iche iche ka a rụọ ya n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede. Na okpomọkụ, mmiri ozuzo ma ọ bụ mmiri ozuzo, a ghaghị ịgbanyere usoro ahụ e mere atụmatụ ruo mgbe mmalite nke ihu igwe akọrọ na nke ikuku. N'oge a na-arụ ọrụ, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eri, ịṅụ sịga ga-ekwe. Ejila arịa kichin eji eme nri. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị naghị elezighị anya, ị kụrụ aka na-akpaghị aka na ngwọta ahụ, fesa ebe ahụ na ájá. Mgbe mmiri na-etinye aka, nakọta ihe niile ma tụfuo ya n'ime akpa maka ihe mkpofu ụlọ. Kpochapụ ihe ọ bụla fọdụrụ na mmiri. Mgbe arụchara ọrụ ahụ, a na-asacha ihe niile na arịa ahụ, ha gbanwere uwe ha, ọtụtụ ugboro ha na-asa aka na ncha ma saa ihu ha. N'ihe nsị, kpọọ onye dọkịta ozugbo wee banye n'ime ikuku ọhụrụ.
N'ịghọta ihe nke "Zircon" dị ka onye na-eto eto na fatịlaịza, atụmatụ nke ngwa ya na ụkpụrụ ya, ṅaa ntị na ndụ nke ọgwụ. Enwere ike ịchekwa nkwakọ ngwaahịa maka afọ atọ site na ụbọchị mmepụta. Ebe gbara ọchịchịrị na akọrọ, dịka nri, usoro ọgwụgwọ, ụmụaka na ụmụ anụmanụ, na ọnọdụ okpomọkụ ruo +25 ° C ga-abụ ihe kachasị mma maka nzube ndị a.
Enwere ike ịchekwa ihe ngwọta ọ bụla karịa ụbọchị atọ na ebe echedoro site na ìhè anyanwụ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa iji acid citric acid acid ihe dị n'ime akpa ahụ na ọnụọgụ nke 1 g ntụ ntụ kwa 5 lita mmiri. Na n'okporo ámá, enwere ike ịchekwa ngwakọta karịa ụbọchị. Ọ ka mma ịkwadebe ọgwụ ozugbo tupu nhazi, kọwaa n'ụzọ doro anya ego achọrọ.